အာယန် ရော့ဘင်ရဲ့ ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက် ထူးခြားတဲ့ အမှတ်တရ ၅ ခု – Sports A2Z
Article • Bundesliga • UCL&UEL
အာယန် ရော့ဘင်ရဲ့ ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက် ထူးခြားတဲ့ အမှတ်တရ ၅ ခု
အာယန် ရော့ဘင်က သူ့ခေတ်သူ့အခါမှာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာက အငြင်းပွားစရာမရှိပါဘူး။ ညာတောင်ပံကနေ အလယ်ကို ဆွဲဝင်ပြီး ဘယ်ခြေနဲ့ ဝေ့ဝိုက်ကန်သွင်းတဲ့ ကန်ချက်တွေဆိုတာ သူ့ရဲ့ အမှတ်အသား‌လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက် အမှတ်အရဆုံးဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ် ၅ ခုကတော့…
၅- ဒဏ်ရာက ပြန်လာတဲ့ပွဲက အကောင်းဆုံးဆု
ဒဏ်ရာများလို့ ဖန်လူသားလို့ နာမည်ပြောင် အပေးခံရတဲ့ ဒတ်ချ်တောင်ပံတိုက်စစ်မှူးကတော့ ၇ လလောက် အနားယူခဲ့ရပြီးနောက်မှာ ဂရိုနင်ဂျင်အသင်းမှာ ပြန်ကစားခဲ့သလို ၇ လကျော်အတွင်း ပထမဆုံး ပြန်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ချိန်မှာ ၂ ဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး အသင်းကလည်း ၄-၀ နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။
သူ့ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက် သူပြခဲ့တဲ့ အနိုင်ရလိုစိတ်ကို အနားယူခါနီးအထိ ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပွဲအပြီးမှာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရချိန်မှာတော့ သူက သိသိချင်း ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ဘဲ ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒဏ်ရာပြဿနာဆိုးကနေ ပြန်လာတဲ့ပွဲမှာ အကောင်းဆုံးဆုရတဲ့ ၃၇ နှစ်သားကြီးရဲ့ ခံစားချက်က မျက်ရည်မထိန်းနိုင်ဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။
၄- စိန့်ပေါ်လီအတွက် အိပ်မက်ဆိုး
၂၀၁၁ တုန်းက ဒေါ့မွန်က ဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာ ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးပြီဆိုပေမယ့် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ရဲ့ ပေါက်ကွဲအားကတော့ အသင်းငယ်လေး စိန့်ပေါ်လီအပေါ်မှာ ပုံကျခဲ့ပါတယ်။ အမှတ်ပေးဖလားမရခဲ့တဲ့ အာယန် ရော့ဘင်၊ ဖရွန့်ခ် ရီဘာရီနဲ့ မာရီယို ဂိုမက်ဇ်တို့ရဲ့ တိုက်စစ်ပေါက်ကွဲအားက အတော်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီး ၈-၁ နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ရော့ဘင်ကတော့ ၂ ဂိုး သွင်းယူခဲ့ပြီး ၃ ဂိုး ဖန်တီးခဲ့သလို သူ့ရဲ့ဂိုးသွင်းကောင်းတာပဲ လူသိခဲ့ပေမယ့် ဂိုးဖန်တီးမှုကောင်းတာပါ လူမသိခဲ့တာတွေလည်း သက်သေပြ မှတ်ကျောက်တင်ခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထောင့်ကန်ဘောက ၁ ဂိုး၊ တိကျတဲ့ ပေးပို့မှုနဲ့ ၂ ဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ တိုက်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံး ပြသခဲ့ပါသေးတယ်။
Rafinha. Robben. Ribéry.
Bayern Munich bid farewell to three outstanding servants in the perfect way. 🏆 pic.twitter.com/mUivW0P5H8
၃- လူစားဝင်သွင်းဂိုးနဲ့ ဘိုင်ယန်နှုတ်ဆက်ပွဲ
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အတွက် သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးပွဲမှာတော့ ဖရန့်ဖတ်အသင်းနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ၅-၁ နဲ့ အနိုင်ရခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် နိုင်ပွဲထက် အရေးကြီးခဲ့တာကတော့ လူစားဝင်ပြီးမှ ‌ဂိုးသွင်းယူသွားခဲ့တဲ့ သူနဲ့ ရီဘာရီပဲဖြစ်ပြီး သူတို့အတွက်တော့ နှုတ်ဆက်သွင်းဂိုးတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ဒေးဗစ် အလာဘာ ခင်းပေးတဲ့ ဘောလုံးကို အသာအယာ ပိတ်သွင်းယူခဲ့ပြီး Robbery ရော့ဘင်-ရီဘာရီဆိုတဲ့ နာမည်ကျော်အတွဲက သွင်းဂိုးတွေကိုယ်စီနဲ့ နှုတ်ဆက်ခဲ့သလို သူတို့လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကလည်း အသိအမှတ်ပြုစရာပါ။ ပွဲအပြီးမှာတော့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းသားတွေအားလုံး မျက်ရည်ဝဲနေခဲ့ကြပြီး သူတို့ကို ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
၂- ဒတ်ချ်တွေကို ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲ ပို့ပေးခဲ့တဲ့သူ
လူသိများခဲ့တာကတော့ ရော့ဘင်အနေနဲ့ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲမှာ အပိုင်အခွင့်အရေးကို အသုံးမချနိုင်ခဲ့ပေမယ့် သူလုပ်ပြခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ သူရခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကိုတော့ မေ့လျော့နေခဲ့ကြတာဖြစ်သလို သူ့အ‌တွက်လည်း အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုလို ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။
တောင်အာဖရိကမြေက ပြိုင်ပွဲအတွင်း သူ့အနေနဲ့ ၂ ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး အသင်းဖော်ကွင်းလယ်လူ ဝက်စ်လီ ရှနိုက်ဒါနဲ့အတူ တွဲဖက်ပြီး ပြိုင်ပွဲမှာ တောက်ပခဲ့ကြတာဖြစ်ခဲ့သလို ဥရုဂွေးနဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာလည်း ခြေစွမ်းပြခဲ့ကြပြီး အသင်းကို ဗိုလ်လုပွဲဆီ ပို့ပေးမယ့် သွင်းဂိုးကို သွင်းခဲ့တာပါ။
Arjen Robben has officially retired from football. The game has lost one of its greatest wingers of all time.
You gave FC Bayern fans so many memories, especially THAT goal in 2013.
Danke, Mr. Wembley ❤️ pic.twitter.com/f3Byexn8Yk
— Jilshie (@LegendaryLewy) July 15, 2021
၁- ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ရဲ့ မစ္စတာ ဝင်ဘလီ
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက် ရော့ဘင်သွင်းခဲ့သမျှ ဂိုးတွေထဲမှာ အရေးအပါဆုံးဂိုးပဲဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ သွင်းယူခဲ့တာပါ။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ဝင်ဘလီကွင်းကြီးမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ဒေါ့မွန်ဂိုးသမား ရိုမန် ဗီဒန်ဖယ်လာကို ကာကွယ်ခွင့်မပေးခဲ့ဘဲ ဂိုးအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့သလို ဘိုင်ယန်မြူးနစ်လည်း ၂၀၁၃ ချန်ပီယံလိဂ်ချန်ပီယံအဖြစ် ဥရောပမှာ ပွဲခံနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ZAWGYI: အာယန္ ေရာ့ဘင္က သူ႔ေခတ္သူ႔အခါမွာ အေကာင္းဆုံး ကစားသမားေတြထဲက တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာက အျငင္းပြားစရာမရွိပါဘူး။ ညာေတာင္ပံကေန အလယ္ကို ဆြဲဝင္ၿပီး ဘယ္ေျခနဲ႔ ေဝ့ဝိုက္ကန္သြင္းတဲ့ ကန္ခ်က္ေတြဆိုတာ သူ႔ရဲ႕ အမွတ္အသား‌လို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ကစားသမားဘဝတစ္ေလွ်ာက္ အမွတ္အရဆုံးျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ ၅ ခုကေတာ့…
၅- ဒဏ္ရာက ျပန္လာတဲ့ပြဲက အေကာင္းဆုံးဆု
ဒဏ္ရာမ်ားလို႔ ဖန္လူသားလို႔ နာမည္ေျပာင္ အေပးခံရတဲ့ ဒတ္ခ်္ေတာင္ပံတိုက္စစ္မႉးကေတာ့ ၇ လေလာက္ အနားယူခဲ့ရၿပီးေနာက္မွာ ဂ႐ိုနင္ဂ်င္အသင္းမွာ ျပန္ကစားခဲ့သလို ၇ လေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုံး ျပန္ကစားခဲ့တဲ့ပြဲမွာ ပြဲထြက္ကစားသမားအျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ရခဲ့ခ်ိန္မွာ ၂ ဂိုးဖန္တီးေပးခဲ့ၿပီး အသင္းကလည္း ၄-၀ နဲ႔ အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။
သူ႔ကစားသမားဘဝတစ္ေလွ်ာက္ သူျပခဲ့တဲ့ အႏိုင္ရလိုစိတ္ကို အနားယူခါနီးအထိ ျပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပြဲအၿပီးမွာ အေကာင္းဆုံး ကစားသမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရခ်ိန္မွာေတာ့ သူက သိသိခ်င္း ဟန္မေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ငိုေႂကြးခဲ့ပါတယ္။ ဒဏ္ရာျပႆနာဆိုးကေန ျပန္လာတဲ့ပြဲမွာ အေကာင္းဆုံးဆုရတဲ့ ၃၇ ႏွစ္သားႀကီးရဲ႕ ခံစားခ်က္က မ်က္ရည္မထိန္းႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ခဲ့ရတာပါ။
၄- စိန႔္ေပၚလီအတြက္ အိပ္မက္ဆိုး
၂၀၁၁ တုန္းက ေဒါ့မြန္က ဘြန္ဒက္စ္လီဂါမွာ ခ်န္ပီယံျဖစ္ၿပီးၿပီဆိုေပမယ့္ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ရဲ႕ ေပါက္ကြဲအားကေတာ့ အသင္းငယ္ေလး စိန႔္ေပၚလီအေပၚမွာ ပုံက်ခဲ့ပါတယ္။ အမွတ္ေပးဖလားမရခဲ့တဲ့ အာယန္ ေရာ့ဘင္၊ ဖ႐ြန႔္ခ္ ရီဘာရီနဲ႔ မာရီယို ဂိုမက္ဇ္တို႔ရဲ႕ တိုက္စစ္ေပါက္ကြဲအားက အေတာ္ျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး ၈-၁ နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။
ေရာ့ဘင္ကေတာ့ ၂ ဂိုး သြင္းယူခဲ့ၿပီး ၃ ဂိုး ဖန္တီးခဲ့သလို သူ႔ရဲ႕ဂိုးသြင္းေကာင္းတာပဲ လူသိခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးဖန္တီးမႈေကာင္းတာပါ လူမသိခဲ့တာေတြလည္း သက္ေသျပ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေထာင့္ကန္ေဘာက ၁ ဂိုး၊ တိက်တဲ့ ေပးပို႔မႈနဲ႔ ၂ ဂိုးဖန္တီးေပးခဲ့ၿပီး သူ႔ရဲ႕ တိုက္စစ္စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အေကာင္းဆုံး ျပသခဲ့ပါေသးတယ္။
၃- လူစားဝင္သြင္းဂိုးနဲ႔ ဘိုင္ယန္ႏႈတ္ဆက္ပြဲ
ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အတြက္ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးပြဲမွာေတာ့ ဖရန႔္ဖတ္အသင္းနဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ၅-၁ နဲ႔ အႏိုင္ရခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ႏိုင္ပြဲထက္ အေရးႀကီးခဲ့တာကေတာ့ လူစားဝင္ၿပီးမွ ‌ဂိုးသြင္းယူသြားခဲ့တဲ့ သူနဲ႔ ရီဘာရီပဲျဖစ္ၿပီး သူတို႔အတြက္ေတာ့ ႏႈတ္ဆက္သြင္းဂိုးေတြျဖစ္ခဲ့တာပါ။
ေဒးဗစ္ အလာဘာ ခင္းေပးတဲ့ ေဘာလုံးကို အသာအယာ ပိတ္သြင္းယူခဲ့ၿပီး Robbery ေရာ့ဘင္-ရီဘာရီဆိုတဲ့ နာမည္ေက်ာ္အတြဲက သြင္းဂိုးေတြကိုယ္စီနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သလို သူတို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အရာေတြကလည္း အသိအမွတ္ျပဳစရာပါ။ ပြဲအၿပီးမွာေတာ့ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းသားေတြအားလုံး မ်က္ရည္ဝဲေနခဲ့ၾကၿပီး သူတို႔ကို ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။
၂- ဒတ္ခ်္ေတြကို ကမာၻ႔ဖလားဗိုလ္လုပြဲ ပို႔ေပးခဲ့တဲ့သူ
လူသိမ်ားခဲ့တာကေတာ့ ေရာ့ဘင္အေနနဲ႔ ၂၀၁၀ ကမာၻ႔ဖလားဗိုလ္လုပြဲမွာ အပိုင္အခြင့္အေရးကို အသုံးမခ်ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ သူလုပ္ျပခဲ့တဲ့အရာေတြနဲ႔ သူရခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြကိုေတာ့ ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့ၾကတာျဖစ္သလို သူ႔အ‌တြက္လည္း အိပ္မက္ဆိုးတစ္ခုလို ျဖစ္ေနခဲ့တာပါ။
ေတာင္အာဖရိကေျမက ၿပိဳင္ပြဲအတြင္း သူ႔အေနနဲ႔ ၂ ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး အသင္းေဖာ္ကြင္းလယ္လူ ဝက္စ္လီ ရွႏိုက္ဒါနဲ႔အတူ တြဲဖက္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေတာက္ပခဲ့ၾကတာျဖစ္ခဲ့သလို ဥ႐ုေဂြးနဲ႔ ဆီမီးဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္မွာလည္း ေျခစြမ္းျပခဲ့ၾကၿပီး အသင္းကို ဗိုလ္လုပြဲဆီ ပို႔ေပးမယ့္ သြင္းဂိုးကို သြင္းခဲ့တာပါ။
၁- ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ရဲ႕ မစၥတာ ဝင္ဘလီ
ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ကစားသမားဘဝတစ္ေလွ်ာက္ ေရာ့ဘင္သြင္းခဲ့သမွ် ဂိုးေတြထဲမွာ အေရးအပါဆုံးဂိုးပဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗိုလ္လုပြဲမွာ သြင္းယူခဲ့တာပါ။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ဝင္ဘလီကြင္းႀကီးမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ေဒါ့မြန္ဂိုးသမား ႐ိုမန္ ဗီဒန္ဖယ္လာကို ကာကြယ္ခြင့္မေပးခဲ့ဘဲ ဂိုးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ခဲ့သလို ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္လည္း ၂၀၁၃ ခ်န္ပီယံလိဂ္ခ်န္ပီယံအျဖစ္ ဥေရာပမွာ ပြဲခံႏိုင္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
အပြောင်းအရွှေ့တိုင်းမှာ ပြိုင်ဘက်တွေထက် ပိုရနေတဲ့ စူပါအေးဂျင့် မီနို ရိုင်ယိုလာ